I-biometrics Ikusasa lokufakazela ubuqiniso? | Kusuka kuLinux
I-biometrics Ikusasa lokufakazela ubuqiniso?
Namuhla ufunda i-athikili ekhishwe nguMat Honan ku Wired isihloko "Bulala Iphasiwedi: Kungani Intambo Yezinhlamvu Ingasakwazi Ukusivikela Futhi" (okuhunyushelwe olimini lwethu ukuthi: "Ukubulala iphasiwedi: Kungani izintambo zezinhlamvu zingasakwazi ukusivikela?"), Ngikhumbule ingxoxo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule namanye amalungu alo mphakathi lapho ubalule ukuthi kuncane kangakanani ukusetshenziswa kwabafundi bezigxivizo zeminwe njengenqubo yokufakazela ubuqiniso, ikakhulukazi kumadivayisi eselula asetshenziswa kakhulu kanye nobuhle obungasetshenziswa ukusetshenziswa kwabo.
I-athikili okukhulunywa ngayo iveza izibonelo zakamuva zokuthi ama-akhawunti wabanye abasebenzisi (kufaka phakathi nombhali waleyo ndatshana) angene kanjani ngobugebengu, kugcizelela ukungasebenzi kwamaphasiwedi nokuqinisekiswa kwamanje nezindlela zokuqinisekisa ukuvikela imininingwane yethu nobumfihlo futhi uphikisa izizathu zalesi sitatimende, zonke zisebenza kakhulu futhi zingafingqwa ngamaqembu amane amakhulu:
1.- Ukwanda kokusebenza kwamandla okuvumela ukuthi amaphasiwedi agqekeziwe ngokusebenzisa izichazamazwi ezinamandla namaphasiwedi atholakala kunethiwekhi. Woza, ngomthamo wama-CPU wamanje nama-GPU, usebenzisa izinhlelo zokugenca ezitholakala kabanzi ngamandla amakhulu, ngezichazamazwi esingazithola kalula kunethiwekhi, kuyisikhathi nje ngaphambi kokuthi othile akwazi ukuthola iphasiwedi yefayela elibethelwe , noma ngabe kuthiwa "iphephile" ngoba iqukethe izinhlamvu, izinombolo nezinye izinhlamvu, ngokuqina ukuthi la makhono azoqhubeka nokwanda ngokuzayo.
Ukusetshenziswa kabusha kwamaphasiwedi ngomsebenzisi ofanayo. Yini esake sayenza? Sisebenzisa i-akhawunti efanayo ye-imeyili ukuziqinisekisa ngokwethu ngezinsizakalo ezahlukahlukene, noma, sisebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo lapho sibhalisa ezindaweni ezahlukahlukene kunethiwekhi, ngaphezu kokuthi "ukubopha" ama-akhawunti ethu ngekheli le-imeyili "lesipele" elifanayo, ngalokho ukuthi uma othile ethola ukufinyelela kwenye yama-akhawunti ethu, uthola ukufinyelela kuwo wonke.
3.- Ukusetshenziswa kwe-pishing ne-malware ukweba amaphasiwedi. Lapha, okuthonya kakhulu umqondo ovamile womsebenzisi, ngoba uma uvame ukuchofoza kuzixhumanisi zokuthi uthola amaposi amangaki noma ukuthi uvakashela amakhasi amangaki, uvezwa ukuletha ulwazi ngokwakho oluzosetshenziswa kamuva.
Ukusetshenziswa kwe "social engineering". Kunezici ezimbili ezisetshenziswa kabanzi lapha. Ngakolunye uhlangothi, ngokwengeziwe sibeka impilo yethu enetheni: I-Facebook, i-Linkedin, amabhulogi womuntu siqu, njll. yenze kutholakale kuwo wonke umuntu, imininingwane eningiliziwe yezimpilo zethu (lapho sifunda khona, obani abangane bethu, igama lesilwane esifuywayo, njll., njll.), ezimvamisa zezimpendulo zemibuzo yokuqinisekisa cishe zonke izinsizakalo esibhalisa kuzo. Ngakolunye uhlangothi, ikhono labaduni lokusebenzisa amathuluzi obunjiniyela bezenhlalo ukuxhumana nezinsizakalo zamakhasimende, libavumela ukuthi bafeze kalula, basebenzise ulwazi abanalo ngathi, ukukholisa lezi zinsizakalo ukuthi zingumsebenzisi true bese ubamba ama-akhawunti ethu.
Ngokuthuthuka komphakathi wolwazi, kuliqiniso elingephikwe ukuthi ubukhona bethu kwi-Intanethi buzoqhubeka nokukhula, kanti thina sizoncika kakhulu ekusetshenzisweni kwezinsizakalo eziku-inthanethi ezimpilweni zethu zansuku zonke, okungeze ku inhloso yokuguqula omakhalekhukhwini babe yizikhwama ze-elektroniki zokukhokha, ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-NFC (Near Field Communication), yizithako zesiphepho esihle maqondana nezokuphepha, ezingenakugwenywa ngokusetshenziswa kwamaphasiwedi kuphela nezindlela zokuqinisekisa njengalezi zamanje.
Njengakuzo zonke izindaba lapho kuhileleka khona ezokuphepha, kuyadingeka ukuthi kusungulwe ukuvumelana phakathi kwamandla wendlela yokuqinisekisa kuqhathaniswa nokusebenziseka nobumfihlo kwensizakalo okukhulunywa ngayo. Ngeshwa, kuze kube manje, ukusetshenziswa okulula kunqobile ngamandla wezinqubo zokuqinisekisa.
Kubukeka sengathi kuqondane ngombono wokuthi isixazululo sale nkinga silele ekuhlanganisweni kwamaphasiwedi, ukuhlaziywa kwamaphethini wokusetshenziswa nokusetshenziswa kwamadivayisi we-biometric ukuqinisekisa inqubo yokuqinisekisa eyenza impilo ibe lula kubasebenzisi, ngezindlela zokuqinisekisa eziningi. uqinisekile kunalawa wamanje.
Kakade abanye abahlinzeki bezinsizakalo kunethiwekhi sebeqalile ukusebenzisa amaphethini wokusebenzisa njengesihlanganisi samaphasiwedi, yingakho, ngokwesibonelo, lapho sifinyelela i-akhawunti yethu ye-Gmail kusuka ku-IP okungeyona le esivame ukuyenza, iyasithumela esikrinini sokuqinisekisa ukuqinisekisa ngenye indlela (ucingo noma umyalezo wombhalo), ukuthi singumsebenzisi osemthethweni we-akhawunti. Ngalesi sici, kubonakala sengathi kukhona ukuvumelana ukuthi kuyindaba yesikhathi ukuthi iningi labahlinzeki bezinsizakalo kunethiwekhi basebenzise okwehlukile okufanayo.
Okusashoda ngukuthi ukusetshenziswa kwezinqubo ze-biometric noma amadivayisi njengengxenye yokufakazela ubuqiniso akukakaqali ukusetshenziswa, kunezindlela ezahlukahlukene, kusukela kokulula njengokuqashelwa kwephethini yezwi noma ukuqashelwa kobuso (okwenziwa ngokuphelele yisoftware) kanye amadivayisi eselula asevele enayo i-hardware edingekayo (imakrofoni namakhamera), ngisho okuyinkimbinkimbi kakhulu njengabafundi bezinhlamvu zeminwe noma ama-iris scanner.
Yize ezinye izinyathelo sezivele zithathiwe maqondana nalokhu, njengokubonwa kobuso ukuvula iselula kwamanye amafoni e-Android noma ukuthengwa kwakamuva yi-Apple kwenkampani i-AuthenTec, ekhethekile kulezi zinkinga, ukusetshenziswa kwayo akuhambeli ngale kwe-anecdotal futhi Okukhathaza kakhulu ukuthi ukuhlanganiswa kwalezi zinhlobo zokufakazela ubuqiniso nezinsizakalo kwinethiwekhi akukakaqali ukuxoxwa.
Ngokubona kwami, ukuqashelwa kobuso noma kwezwi, yize kuyizindlela ezilula kakhulu ukuzisebenzisa futhi kungadingi okokusebenza okwengeziwe, kuyizindlela ezivikeleke kakhulu, kuyilapho ama-iris scanner engenakwenzeka neze ukuhlanganisa namadivayisi eselula, Okukhethwa kukho okuhle kakhulu abafundi bezigxivizo zeminwe, okuthi ngenxa yobukhulu babo obancishisiwe nobuningi "bezinkinobho" kungaba yisixazululo esifanelekile; Ake ngichaze: uma sihoshozela ngenxa yomkhuhlane noma sihlangabezane nengozi noma silimele ebusweni, izwi noma ukubonwa kobuso kungaba nzima, ngenkathi sine-reader zeminwe, singakwazi ukumisa ukusetshenziswa kweminwe eminingi, ngakho-ke Ingozi eyodwa ngeke isivimbele ekutholeni idatha yethu nezinsizakalo.
Njengamanje sekukhona ezinye izincwadi zokubhala ezihlanganisa abafundi bezinhlamvu zeminwe ekucushweni kwabo, ngaphandle kokubona ukwanda kwentengo enkulu kulezi zinhlobo, okusivumela ukuthi sibonise ukuthi izindleko zabo azibalulekile, yize ukusetshenziswa kwazo enwetshiwe. Ngakolunye uhlangothi, ngeshwa okwamanje kukhona amadivayisi eselula ambalwa kakhulu anabafundi bezinhlamvu zeminwe futhi ukuhlanganiswa kwawo kuzo akubonakali kuwumkhuba.
Eminye imibono iphakamisa ukuthi sibhekene nesimo senkukhu namaqanda sakudala: abafundi abahlanganisiwe kumadivayisi ngoba izinsizakalo zenethiwekhi azizisebenzisi njengendlela yokuqinisekisa, kepha zona izinsizakalo zenethiwekhi azizisebenzisi njengendlela ukufakazela ubuqiniso ngenxa yenani elincane lamadivayisi ahlanganiswe njengokujwayelekile. Lokhu kubukeka kuyifindo likaGordian okungekho muntu onesibindi sokulisika okwamanje.
Ngale kwale mpi esizithola sikuyo, ngicabanga ukuthi kunesimo okufanele sixazululwe ukuze sisetshenziswe futhi lokho ukusungulwa kwamazinga adingekayo okusetshenziswa kwezigxivizo zeminwe ekuqinisekisweni, okungukuthi, umfundi wezinhlamvu zeminwe uskena isithombe futhi kuyo, kufanele kwenziwe uhlobo lwesiginesha ye-elekthronikhi, okuyiyona ezothunyelwa kwinsizakalo njenge "password" yokufakazela ubuqiniso, ngakho-ke i-algorithm yokwakha leso siginesha kufanele iqinisekise ukuthi abafundi abahlukahlukene bakhiqiza amasiginesha alinganayo unyawo olufanayo, ngaphandle kokulimaza ukuphepha futhi lokho akubonakali kuyinto elula.
Yebo, ngiyazi ukuthi njengamanje abanye bazokhipha abakubonile kwifilimu lapho ngokuphakamisa isigxivizo somunwe esisele engilazini abakwazi ukukusebenzisa ukuthola ukufakwa, kepha lokhu, ngaphezu kokumangazayo okuvela esikrinini, Ngicabanga ukuthi kuba yimfashini okufanele siyinakekele ngokuzayo; Ngaphandle kokuthi omunye wethu abe yi-007 Agent noma abe namakhodi okufinyelela eFort Knox.
Njengoba umbhali wale ndatshana eveza lokhu okuthunyelwe esho, isinyathelo sokuqala sokuxazulula inkinga wukubona ubukhona bayo bese sikwazi ukuqala ukuphakamisa izixazululo futhi yilokho okumayelana ngqo nalokhu. Ngincoma bonke abangakwazi ukufunda i-athikili engibhekisa kuyo, ngoba iyakhombisa kakhulu, futhi iyathandeka ukuyifunda (ngeshwa labo abangasazi isiNgisi ngeke bakwazi ukuyithokozela), ngesikhuthazo esengeziwe sokuqukethe amaparele okuthi kubaduni bakhohlise izinsizakalo "ezinedumela elihle" ekutholeni ukufinyelela.
Uyavumelana nombono wami noma ungomunye walabo abasakholelwa ukuthi amaphasiwedi asenele?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-biometrics Ikusasa lokufakazela ubuqiniso?
I-athikili enhle futhi ngokombono wakho yi-100%. Njengomsebenzisi senza amaphutha amaningi maqondana nezinkinga zokuphepha futhi lokhu kungaba yindlela enhle kakhulu yokuphepha kancane.
Into ebabayo ukuthi badabula umunwe wakho noma balahlekelwe ngumunwe wakho xDDD
Bheka, ngaphandle kokudabukisa, kunesixazululo sayo yonke into, kunezindlela ezi-2 zokuthi "ufunde" isigxivizo somunwe: okulula kakhulu ukukhiqiza isithombe esibonakalayo, ngaleyo ndlela kulula futhi kulula ukukhohlisa, empeleni, umane uthathe isigxivizo somunwe Uyikopisha ngokusondeza isithombe, uhamba phezu komdwebo wamamaki wokululeka ngomaka, uwuphinda uwukopishe, uwunciphise usayizi wawo wokuqala ne-voila ... ngawo ungakhohlisa umfundi; Kepha, kunenye indlela ephephe kakhulu, ngumfundi odala isithombe kusuka kuthwetshulwe umehluko wamandla phakathi kwemikhawulo nezigodi zonyawo, ukuze, uma umunwe unqunyiwe, ayikho indlela esebenza ngawo .
Ngakolunye uhlangothi, kutholakele ukuthi izigxivizo zeminwe ziphinda zivuseleleke ngokuhamba kwesikhathi, noma ngabe isikhumba sifakwe ezandleni zomunwe. Ngaphezu kwalokho, ngokungeziwe, lapho ulungiselela abafundi abafaka izigxivizo zeminwe, bakunikeza ithuba lokufinyelela ngeminwe yeminwe engaphezu kweyodwa, ukuze ukwazi ukusebenzisa, ngokwesibonelo, izinkomba zesandla ngasinye futhi uma ulahlekelwa esinye, unokunye.
I-xDDD Yebo ndoda, impela ijabule 😀
Ngikhumbule okushiwo nguRichard Stallman ekuhambeleni kwakhe kokugcina e-Argentina (ngaphambi kokuthi kwebiwe i-laptop yakhe):
«Ngibe sengithola ngishaqekile izindaba zeSIBIOS System, abafuna ngazo izigxivizo zeminwe zawo wonke umuntu ongena ezweni. Ngokubona lezo zindaba, wacabanga ukuthi ngeke esabuyela e-Argentina. Kukhona ukungabi nabulungisa okufanele simelane nakho noma ngabe kubiza kangakanani. Angiyiniki iminwe yami; bangazikhipha ngamandla kuphela. Uma izwe lifuna bona, ngeke ngiye. "
Noma kunjalo uStallman uvumile ukuthi akasebenzisi ama-smartphones, akasebenzisi i-intanethi, futhi ngokwazi kwami, ukuthengiselana kwakhe kunemali kuphela, ngakho-ke ngeke adinge noma yini yalokho, futhi noma kunjalo, akakwazi ukuvimbela uBig Brother ukuthi ambuke, Kepha singaphakamisa ukuthi uthuthele ezweni lami kanye nenkinga ye-inthanethi, ama-akhawunti eposi, ukubhenka oku-inthanethi, njll., Njll., Into embi ukuthi uzozizwa unesithukuthezi ...
Le ndoda kufanele iqale ukubona okuthe xaxa ngokungabi nabulungisa okwenziwa ezweni lakubo, futhi ikakhulukazi ukungabi nabulungisa okwenziwa yileli lizwe kwezinye izindawo, okungaphezulu kakhulu kokukucela isigxivizo somunwe ...
Lokhu kuyamangaza, ngoba esikhathini esithile esedlule ngifunde ku-athikili (angiwukhumbuli umagazini) ukuthi ukuqinisekiswa kwe-biometric kwase kuvele kwahlukaniswa njengobuchwepheshe obusendleleni yokuyekiswa.
Isizathu sokuthi kungani cishe kungabikho brand yama-laptops afaka isifundi seminwe
I-athikili enhle kakhulu ... ... kaningi ngicabange ukuthi yize ngike ngabona abafundi bezinhlamvu zeminwe kumamodeli ahlukahlukene ezincwajana ... ... abazilethi ngamamodeli amasha, lokhu akusho ukungabi bikho kokusetshenziswa kwaleli thuluzi empeleni kungaphezu kokuthakazelisa? ..
Ngaphezu kokuqaliswa okudingekayo kwalezi zinhlelo njengendlela yokuphepha yezinye izinsizakalo zenethiwekhi.
Kuyathakazelisa kakhulu .. ngiyabonga ngokwabelana ..
Ngincoma ukuthi ufunde i-Wired article eveza lokhu, ngoba ivumela ukuqonda okungcono kwalokhu okuhlongozwayo.
Ngiyazi ukuthi kuncane kangakanani ukusetshenziswa kwabafundi bezigxivizo zeminwe, kodwa angikaboni lutho ukuthi ubuchwepheshe obusezinhlelweni zokuyekiswa, futhi noma ngabe kushiwo kwenye indawo, bekungeke kube okokuqala ukuthi kuyadingeka "ukuvusa »Umuntu ofile ukuphendula inselelo.
Engizama ukukuchaza kule ndatshana ukuthi, empeleni, izindlela ezintsha, eziphephe kakhulu zokufakazela ubuqiniso ziyadingeka, futhi ngokubona kwami, abukho obunye ubuchwepheshe obungasetshenziswa ukwedlula amadivayisi we-biometric, futhi yilokho kanye okuphathelene nakho .
Kuzwakala kungumqondo onentshisekelo kimi. Kuma-Smartphones kuzodingeka bathole indlela yokuyihlanganisa nezikrini, futhi-ke, ukuthi ayisebenzisi ibhethri eliningi.
Idivayisi yokuskena izigxivizo zeminwe angicabangi ukuthi kungenzeka ukuthi uyihlanganise nesikrini samaselula, uma ubheka isithombe esikhombisa le ndatshana, uzobona ukuthi kuthatha isikhala esincane kakhulu futhi ngicabanga ukuthi kungaba lula ukusibeka endaweni ethile kuleli cala, Eqinisweni, sekuvele kunezinhlobo ezithile ezinayo, njengeFujitsu Tegra 3.
Akunginiki umuzwa omuhle. INational Population Registry (yebo, lapha eMexicalpan de las Tunas; futhi ayikasetshenziswa ngezinga elikhulu) ihlose ukusebenzisa hhayi kuphela iminwe, kodwa futhi ne-iris. Iphutha ekugcinweni kwale datha esimweni lapho zonke zivulwa khona ngeminwe kungenza le phrojekthi ibe yingozi kakhulu.
Ungashintsha iphasiwedi yakho noma kunini lapho ufuna khona, kepha izigxivizo zeminwe azikwazi. Yingakho nginovalo oluncane ngalokhu.
Ngeshwa, kusuka kulowo Big Brother ukuthi ohulumeni bakhona, akekho osisindisayo, ngoba kwanele ukuthi babeke ngokomthetho ukuthi ukubhaliswa kweminwe yethu kubalulekile ukukhipha umazisi (i-DNI, ipasipoti noma yini abayibiza ngayo endaweni ngayinye) ngalokho siboshwe kahle sonke. Ukwengeza kulokho ukuze bathole le mibhalo kamazisi, bathatha isithombe (noma kufanele usinikeze esisodwa), esinesoftware yokwazi ubuso abanabo, esivumela ukuthi basiqaphe noma nini lapho befuna. Uma umbono wokuthi okuthile okubizwa ngokuthi ubumfihlo kusesekhona, sicela usilahle ngokushesha ngoba kumane kuyisimera.
Angivumelani neze. Ukuthi basiphuca ubumfihlo bethu akusho ukuthi kufanele sibe ngabasizi babo. Ngicabanga ukuthi ngokuzayo lezi zindlela zizokwehlukanisa abantu, okungenani ngiyenqaba ukuthi ngingaqhubeki nokukulwela ngendlela efanayo nale enginqabe ngayo iminyaka ukungayilweli isoftware yamahhala.
Kungakho igama elithi "Isoftware Emahhala" likhulu kakhulu kunokumane nje "umthombo ovulekile" (yize ngokwenzayo kuziphatha ngendlela efanayo) kusukela ngenkathi i-SL imele ifilosofi nombono wezenhlalo lapho inhlangano ye-openource ikhuluma kuphela isebenza ngendaba yezobuchwepheshe yokuthuthuka kohlelo, enye ingumnyakazo wezenhlalo namasiko, enye imishini yokuthuthuka - Isoftware yamahhala, ngencazelo, iqukethe umthombo ovulekile.
Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ngithuthele kwi-SL kudala, angizange ngikhohliswe kuphela ubuhle bezobuchwepheshe be-Linux kernel ephefumulelwe yi-Unix kodwa futhi nangesithembiso seNkululeko esivikelwa yi-FSF.
Ngiyasithanda lesi sithombe, lapho ngisibona ku-RevolutionOS ngasheshe ngathatha isithombe-skrini: http://i.imgur.com/A1r0c.png
Umbhali waleyo ndatshana ungumbombayi ophathise impilo yakhe u-Apple, ngifunde i-akhawunti yakhe yokuthi i-akhawunti yakhe "igqekeziwe" kanjani futhi iqiniso ukuthi bekuyiphutha elibi elenziwa yi-Apple.
(By the way, it annoying it is that the term "hack" is used lightly and for everything, akekho umuntu owazi into embi futhi bakhuluma ngoba badlala ngendlebe. Okwenzeke kuleyo hotdog akuhlangene "nokugenca." )
Kungakanani i-bullshit ekhona lapho futhi nomdlandla wonke umuntu ayithengayo, kuyafana ne- "antivirus"> :(
Abafundi bezinhlamvu zeminwe emshinini (okwami) banenye i-BULLSHIT ephelele, ngakho-ke ngifuna umfundi wezinhlamvu zeminwe kwi-laptop yami uma kwenzeka kwenzeka ukuthi umshini untshontshiwe futhi i-HD ayifihliwe, ukuphela kwento okufanele bayenze ukukhipha idiski bese ulixhuma kwenye ikhompyutha? INKUNZI.
Okusebenzayo ukuqapha, akukho okunye.
1. Emshinini wendawo, sebenzisa i-passwd okungenani yezinhlamvu eziyi-15 zamagama (aZ10 -. # Etc), eyami inezingu-16. Uma uyikhetha ngokucophelela, ayinakufinyeleleka kulabo abakubukayo, yifake ngesikhathi esifanayo nawe ukujwayela ukuyisebenzisa, maduzane ngoba uzoyidinga ukuqinisekisa imisebenzi yokuphatha yohlelo, ngiyibhale ngomzuzwana.
2. Uma sinamakhompyutha afinyeleleka ngaphandle kwe-LAN yethu, qaphela ukuthi ayabuyekezwa futhi, uma kungenzeka, ngezinsizakalo ezisebenza kumachweba anganqunyelwe kusengaphambili.
Njengesendlalelo esingeziwe, phindaphinda ngayinye yalezi zinsizakalo esizisebenzisayo, ususe izintambo ezingazikhomba nge-nmap nokunye okunjalo.
3. Bethela imidiya yesitoreji esiyisebenzisayo.
4. Kumaphasiwedi asenetheni, sebenzisa izinsiza ezifana neLastPass ezikhiqiza amaphasiwedi ezinhlamvu zezinhlamvu ezingama-20 bese uwagcina ngendlela ebethelwe ukuze zingatholakali uma ungenawo ukhiye oyinhloko.
5. Uma inethiwekhi izofakwa ku-subnetnet ukuyaba phakathi kwabasebenzisi abahlukahlukene, akwanele ukusebenzisa izinqubomgomo zokusebenzisa ngokuphelele kumakheli e-IP, kuyadingeka ukusebenzisa ama-VLAN YEBO NOMA YEBO.
6. Maqondana nokuvikeleka kwenethiwekhi, okuncane okudingekayo ukuthi ube nolwazi oluphelele nokuphathwa kwemodeli ye-OSI kanye nezendlalelo eziyi-7, ngaphandle kwalokho awukwazi ngisho nokukhuluma.
7. Ngamadivayisi eselula udaba lwezokuphepha luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, lapho umfundi wezinhlamvu zeminwe angasiza
Ku-smartphone yami ye-Android ngisebenzisa iphethini ukuyivula ngoba isebenza kakhulu kunokufaka ukulandelana kwezinombolo, kepha umuntu ovuke ngokulingene angabona kalula ukuthi ngokubuka isikrini sephrofayili ngokukhanya angathola iphethini ngokuya nge amamaki anamafutha ashiywe yiminwe yami.
Umzabalazo phakathi kokuphepha nokusebenziseka uhlala njalo, kufanele wazi ubuthakathaka bese unquma ukuthi sikhetha ukuthi unethezeke noma uphephe yini, okunye kungukuhlanzeka okumsulwa.
I-OpenSSH noma iWindows, lowo ngumbuzo.
* I-BSD xD
Bengicabanga ukuthi i-SSH imangalisa kanjani nokuthi i-computing yanamuhla ibingatholakali kanjani ngaphandle kwaleli thuluzi.
Iqiniso lokuthi umbhali wale ndatshana ungumuntu othanda izithandani aliphazamisi ngandlela thile iziphakamiso zalo, ngoba zibhekisa ezindabeni ezidlula kude i-OS esiyisebenzisayo, futhi YEBO, kuyiqiniso ukuthi bafinyelele i-akhawunti yabo ngenxa yephutha elibi I-Apple, njengoba uphakamisa, kepha; Ingabe uqiniseke ngokuphelele ukuthi umhlinzeki wakho wesevisi ye-imeyili ngeke enze iphutha elifanayo?
Mayelana nalokho okuphakamisayo ngokusetshenziswa kwegama elithi hacker, ngokweWikipedia, 'Okwamanje lisetshenziswa ngendlela efanayo ukubhekisa kakhulu ezigebengwini zamakhompiyutha', kungakhathalekile ukuthi iyiphi inqubo esetshenziselwe ukwenza ubugebengu, empeleni oduni (noma omunye wabaduni) odumile emlandweni, uKevin Mitnick, wasebenzisa kabanzi lezi zindlela zobunjiniyela bezenhlalo ukuthola imininingwane yezinkampani ezinkulu nezikhungo, njengoba kuchaziwe ezincwadini azishicilele.
Ngakolunye uhlangothi, ukugwema ukuthi ngokususa i-hard drive kwikhompyutha bangakwazi ukufinyelela kudatha yakho, kunamathuluzi amaningi avumela ukubethelwa kwamafayela, amafolda, ukwahlukanisa ngisho nediski lonke, okwenzekayo ukuthi asizisebenzisi, akusekho kungaba ngenxa yokungazi noma ukuvilapha, ngakho-ke ukugwema lokho kwephula ezokuphepha kukithi.
Manje, zonke izinyathelo zokuphepha oziphakamisayo zisebenza kodwa ngeshwa azisebenzi lapho sisebenzisa izinsizakalo kunethiwekhi ezinikezwa abantu besithathu, njengama-akhawunti we-imeyili, ama-akhawunti asebhange, njll., Kusukela ekuphepheni kwezinqubo zokuqinisekisa futhi ukuqinisekisa kulezi zimo kuncike kumhlinzeki wesevisi, hhayi kithi.
Noma kunjalo, ngiyabonga kakhulu ngamazwana akho, ahlala esiza ukucacisa imibono.
Noma ngubani ofuna ubumfihlo, ohamba ayohlala esiqeshini somhlaba maphakathi nolwandle. Njengamanje kunjengoba usho kokunye ukuphawula, ubumfihlo yi-chimera, i-utopia.
Endabeni yenethiwekhi (mhlawumbe) ukuze ivikeleke kancane kuzodingeka sibe nesiphakeli sethu futhi singanciki kwizinsizakalo ezivela eceleni ezifana ne-Gmail, i-Facebook nezinye, ngoba akekho osusa ukuthi bathengisa imininingwane yethu nedatha kumthengi omkhulu kakhulu ..
Kuhle lokho, vula umgodi ungene ngaphakathi ongafuni ukwephulwa kobumfihlo babo…. upss, igama selivele lingishiyile kwisichazamazwi se-XDDD
Ukuthi inkathi ngayinye inezinselelo zayo kanye nezingozi zayo ezihambisana nayo, eminyakeni yemihume, ingozi yayidliwa yisilo, namuhla singaba izisulu zengozi yemoto, kepha lokho okumayelana nokuthi akukhona ukuthi siyeke ukuphuma ngaphandle, uma kungenjalo ukuqonda ubungozi futhi wenze konke okusemandleni ukugwema lezo ezingagwemeka; Futhi YEBO, ngeshwa akusekho okuyimfihlo, noma ngabe siya esiqhingini maphakathi nolwandle, ngoba isathelayithi ye p *** Google Earth iyadlula futhi isithathe isithombe lapho sinqunu olwandle ... 😉
JAJAJAJAJAJAJA .. Kufanele ngiqale ukusebenzisa iGoogle Earth bese ngithola isithabathaba somuzi wePlayBoy .. mhlawumbe into enhle engingayithatha xDDD
Bheka lokhu: http://www.youtube.com/watch?v=pLrL1Yg20rA
Kepha u- @ Charlie, incazelo ye-WP ye-hacker inguhlobo lwethemu olunamathebhu futhi oluyisiphukuphuku ngempela, ngiyabonga ukuyilinganisela ngoba ngizoyilungisa, kusobala ukuthi noma ngubani obhale leyondatshana akakwazanga kahle noma uchemile futhi ufuna ukuhlanekezela nokudicilela phansi abaduni .
Ngezinga elikhulu noma elincane, sonke singabaduni. Ukugenca ukuthola izindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa izinto ezifanayo nokuthola ukuba sengozini kuhlelo, noma yiluphi uhlelo, kungaba yisoftware, isibalo sezibalo, umnyango we-recital ... lokho kuwukugenca okumsulwa nokuyiqiniso, okunye, ngiyaphinda: i-tabloid tabloid engazi ukuthi ikhuluma ngani u-U isebenza ngokungaziseli ngokwamaqembu athile - futhi ngokwengeza bonke labo abathenga leyo ncazelo ye-HACKING.
Ukugenca kuhle! Impela uchitha isikhathi esiningi ungene ngaphakathi kwekhonsoli kunokuba ubona!
Kulungile, yebo, uma sithola intokozo siqala ukuhlukanisa phakathi kwe-hack nokuqhekeka, njll., Njll., Okwenzekayo ukuthi lapho kungekho elinye igama elingcono elaziwa yibo bonke, kuzodingeka sisungule elilodwa, ngoba ukubeka «umuntu wenza ubugebengu esebenzisa amathuluzi ekhompiyutha »kuzwakala kunesicefe, akunjalo?
Futhi yebo, ngiyavumelana nawe, nokugenca nakho kungaba kuhle, ukuthi kunekhodi yokuziphatha ye-hacker ejikelezayo eyenza kucace bha. Kwenzeka njengakwisayensi nobuchwepheshe jikelele, okungekona okuhle nokubi, uma kungenjalo kungenxa yokuthi abantu noma ohulumeni bakusebenzisa kanjani.
Kulokhu-ke angiyona "intokozo", izinto kufanele zibizwe ngamagama azo ngoba lokhu kwenza umehluko ukuthi uma sikhuluma into sisho lokho kanye hhayi okufana nakho; Iningi labantu namuhla alikwazi ngisho nokufunda futhi uma likwenza lilinganiselwe kakhulu futhi alinaso nolwazimagama futhi leyo ngenye yezinkinga ubuchopho babo obungakutholi ukuthi bakuveze kanjani lokho abafuna ukukusho futhi bagcine sebekhuphuka, behlanekezela futhi bechitha ulimi.
Futhi uma sonakalisa ulimi sonakalisa indlela yethu yokucabanga, okungamagama, ngoba abantu bacabanga ukusebenzisa imiqondo nathi esizuza ngayo ukusebenzisa amagama ngakho-ke, uma silulumagama oluncane esinalo, lapho siba nesihluku ngokwengeziwe, kulula kanjalo.
Ngokunjalo, ukuba "nenjabulo" kuyinto efanelekile, ubuhle (futhi ngiziqhenya ngokuziqhenya futhi ngiyaqikelela), enye into engaphezulu yendlela eya ekwenzeni kahle kusukela intokozo ifuna ubuhle ezintweni:
isi-adj. Kokusungulwa okukodwa nokungavamile, ubuhle noma ukunambitheka
i-exquisite adj [ekski'sito, -ta] enokunambitheka okungajwayelekile nekhwalithi ephezulu
Okuphambene nokuba yinhlamba, ukungacabangi, bheka iTinelli, iRial, iFort, iJersey Shore nezinye>: D
Isigebenga luhlobo lomuntu, umqhekeki olunye uhlobo lomuntu, isigebenga singenza njengesiqhekezi uma sifuna, kepha akusikho lokho esinentshisekelo kukho, isigebengu sikhohliswa yizinkinga ezizwakalayo lapho kufanele sicabange futhi sithole ilungelo buyela. Umgengezi ungumdali, umphuphi, umuntu othanda ukuzivocavoca, umuntu oqhekezayo usebenzisa lolu lwazi, imvamisa engaluqondi kahle ukwenza ubugebengu.
Kumgengeli ojwayelekile kuyinhlamba ukumphutha njengomuntu oqhekezayo.
Yebo, nginesizotha, yize kungenjalo kulokhu, lapha ngisebenzisa amagama afanele kuphela.
"Okwenzekayo ukuthi uma kungekho isikhathi esingcono esaziwa yibo bonke,"
Leli gama alilahlekile futhi belilokhu laziwa futhi liyiCracker, awudingi ukusungula noma yini.
Njengoba ngikuchazelile phambilini, abezindaba abebedonswa yizintshisekelo zabantu besithathu (ohulumeni / ukuvimbela kanye nezinhlangano zabacindezeli / imboni) babephethe ukukhubaza isigebengu futhi sasimbeka ezindebeni zawo wonke umuntu njengokuthile okufana nephekula lamabhomu noma umbulali obulalayo lapho BANGAKWAZI, YEBO BAKUFUNA UKUFUNA, ukusebenzisa igama elithi `` cracker '' nokumaka umehluko njengoba isigebenga siyithuluzi lenqubekela phambili emphakathini, phela kungumsebenzi wombuso wokufundisa, hhayi owami, ngiyazinikela kwezinye izinto.
I- "Ethical Hacking" ukubhekelwa emsebenzini okungajabulisi futhi kunesizinda esiqondile lapho sibona ukuthi indikimba yazalwa kanjani.
UFacho ofana ne-US, oyinhloko obhekene nokusabalalisa ukucoceka nokuhlanzeka uma kuziwa kubaduni noma ukukhombisa amazinyo ezweni elizinze esiqhingini esincane esinesibindi sokuma ngezinyawo sibatshele UMZUZWANA! (noma okwesikhashana!)
ezweni elizinze esiqhingini esincane esinesibindi sokuma ngezinyawo sithi MOMENTITO!
Uma usho iCuba, kungcono ungangeni kuleso sihloko 😉
Ngiyakuthanda lokhu! ... kuyiqiniso ukuthi noma iyiphi ingxoxo ehlala isikhathi eside ngokwanele, kungakhathalekile ukuthi sithini isihloko okukhulunywa ngaso, igcina iholele ekuqhathanisweni ne-fascism (facho, njengoba usho) futhi kuleli phuzu, Ngiyakugwema ukuqhubeka nakho, phakathi kwezinye izinto, ngoba ngihlala kuleso "siqhingi esincane" osishoyo nokuthi abaningi bazi kuphela njengesethenjwa futhi bathatha njengesibonelo salokho okulungele ngamunye.
Ngiyabonga ngemibono yakho nangokudlula lapha.
Ngale ndlela ... njengothisha omuhle wolimi lwethu kanye nomuntu «omuhle», kufanele wazi ukuthi into efanelekile izolungiswa
yebo, kubi kakhulu ukuthi ungaba kude futhi angikwazi ukukuthengela obhiya abakahle (uMaximator, Hoeegarden, Guiness, khetha!)
Ngelinye ilanga ngingathanda ukuthi sikwazi ukukhuluma ngokujulile ngale ndaba, ngiyazi kakhulu yize kungafani nokuyibona ngaphandle kunokuthi siyiphile.
@Charlie: unayo ngaphakathi.
Uma uza eCuba ungakhohlwa ukubhala ngaphambilini, ukuthi kungakuhle ukuhlala phansi uphuze obhiya abambalwa bese wenza ihlaya kancane 😀
Ngisithandile lesi sihloko.
Ngicabanga ukuthi okwamanje sifaka "ukhefana" owodwa ku-Net, sesivele sihloliwe futhi ngalokho kwenziwa umbono mayelana nezinto esizithandayo, ubuthakathaka, ukushiyeka, njll. Konke lokhu kuphakamisa izifundo ezithile zemakethe noma zokumaketha ezisetshenziselwa zona. . kuhle? Akulungile? .... Ngabe ukhona owaziyo lokhu?
Mhlawumbe konke lokhu kuyalahleka maqondana nendatshana eshiwo.
Ngijabule kakhulu ukuthi usithande lesi sihloko futhi ngiyavumelana nawe ukuthi sihlale sihlolwa, ngisho noma singangeni kwinethiwekhi, uma ungabaza, phuma uyobheka ukuthi mangaki amakhamera "ezokuphepha" asibukayo, futhi uqinisile Akukho lutho ngalesi sihloko okuvela kule ndatshana, mhlawumbe ngokuzayo ngizobhala okuthile ngakho, kepha lokhu bekuvele kuyi-billet enhle futhi bengikhetha ukunamathela esihlokweni okukhulunywa ngaso.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho nangokudlula ngakithi.
Kuwo wonke amadolobha asemakhaya azungeze idolobha engihlala kulo, akhona lawo makhamera?
Angazi ukuthi kunjani edolobheni ohlala kulo, kodwa okungenani "edolobheni" lami, lapho ngoba singenayo ngisho nokufinyelela i-intanethi, ingasaphathwa eyokunye izinto eziningi, amakhamera okusibheka YEBO esinakho , futhi impela ...
Ngokusobala, ibrotha enkulu iqala e-USA naseYurophu.
Indlela enhle yokubeka isihloko ukuze kuxoxwe ngaso, kodwa, leso sobumfihlo, kuwebhu noma kwi-intanethi, angikukholwa, ngisho namanje njengoba ngingumsebenzisi we-GNU / Linux, nangaphansi ngaphambili lapho ngangisebenzisa iWindows; Nge-password noma i-biometric akunandaba angikholelwa kulokho kobumfihlo; Kuthiwani uma kungasiza okuthile, mhlawumbe kungaba ukwazi ukuthi ikhodi yomthombo yenzani ngemuva kwezindawo zokuqhafaza noma imiyalo yendawo yemiyalo yomyalo (ngicabanga ukuthi yingakho kwesinye isikhathi ngibonile kwezinye izindatshana kuwebhu ithoni ethile yokuhlekisa ngayo Igama le-GNU "i-wildebeest emhlangeni", abantu abavamile abazi ukuthi luphi ulimi oluhlelayo).
Ngicasuke kakhulu ukuphoqelelwa ukwenza, isibonelo, ukuba ne-X account yensiza ye-X (i-facenoseque, i-twetnoseque noma enye lapho kusetshenziswa khona amaphasiwedi) ngenhloso yokusebenzisa ilungelo lentando yeningi elivezwa ngokukhululeka ukuveza imicabango noma imibono futhi; Eqinisweni, kuyangikhathaza kakhulu ukubekelwa eceleni lapho sibhekene khona lapho amanye amakhasi wewebhu X engakuvumeli ukuthi ubone imininingwane abakunikezayo uma ungenamsebenzisi wezinsizakalo X ezikhuluma ngemigqa emuva.
Lesi sifundo ngisithola sikhombisa ukufana futhi siwusizo, ngiyabonga ngokwaba ngaso.
I-PeaZip 4.8 Iyatholakala